အှနျလိုငျးပျေါ မှာ ပြံ့နတေဲ့ အသံဖိုငျ နဲ့ ပတျသကျပွီး သူရဲ့ လုပျရပျ အမှားတှကေို ဖှငျ့ဟဝနျခံရငျး အနုပညာ လုပျစားလို့ မရတော့ပါဘူးလို့ ပွောလာတဲ့ ယုနျလေး – Shwe Likes
G Shwe | February 11, 2021 | Celebrity | No Comments
ပရိသတျ ကွီးရေ အဆိုတျော ယုနျလေး ကတော့ သူလုပျခဲ့တဲ့ အမှားအတှကျွ ပနျလညျတောငျးပနျ စကားဆိုလိုကျပွ နျတာပဲ ဖွဈပါတ ယျနျော။ သူ့ရဲ့ အမှားမြား ဟာလညျး ပွညျသူလူ ထုတဈရပျလုံး ခှငျ့မလှတျနိုငျစရာ ကိစ်စဖွဈနတောေ ကွာငျ့ လူမှုကှနျယကျပျေါတှငျ ပွငျးထနျစှာ ဝဖေနျရှုံ့ခခြွငျးတှေ ခံနရေတာလညျး ဖွဈပါ တယျနျော။ အသံဖိုငျက ကြှနျတေျာ့ အသံပါ ဝနျခံပါတယျ။
အနုပညာ လုပျစားလို့ မရတော့ပါဘူးလို့ ပွောလာတဲ့ ယုနျလေး
အသံဖိုငျ က ကြှနျတေျာ့ အ သံပါ ဝနျခံပါတယျ . ကြှနျတျော တောငျးပနျတယျ ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ မလုံလောကျဘူး . ဘယျလို စကားလုံးမြိုးမှ မရှိဘူးဆိုတာ သိပါတယျ ခငျမြာ ကြှနျတေျာ့ သူငယျခငျြး အရငျးတှကွေီးပဲ ရှိတဲ့ Group Chat မှာ . အားလုံး ထငျမွငျခကျြကို ပွောကတြယျ .ကြှနျေ တျာ့ကို လညျး ပွောပါ ဆိုတဲ့ အတှကျ လှတျလှတျလပျလပျ ပွောပါဆိုတဲ့ အတှကျ ကြှနျတျောပွောမိလိုကျပါတယျ .
အဲ့ထဲက တဈယော ကျက လိုကျဖွနျ့ လိုကျတာပါ .မလုပျသငျ့ဘူး . အရှကေ့ သီခငျြးကိစ်စထဲက စာသားနဲ့ ပွညျသူတှေ ဝိုငျးမုနျးနတေဲ့ အခြိနျ ကြှနျတေျာ့ကို လူသတျကှငျးထဲ ထပျပိုလိုကျတာ အဲ့သူငယျခငျြး မလုပျသငျ့ဘူးလိုထငျပါတယျ .ကြှနျတျော အနူးအညှတျ တောငျးပနျ ပါတယျ.တောငျးပနျလညျး ဘယျသူ့မှ ခှငျ့မလှ တျဘူးဆိုတာ သိပါတယျ . အကွိမျကွိမျ လုပျ အကွိမျကွိမျတောငျးပနျသလို ဖွဈနတောလဲ စိတျဓာတျ ပိုကပြါတယျ .
ဂီတ သမားတှကွေီးပဲ Group ပရဟိတ Group တခွား နယျပယျ အစုံကGroup ပေါငျးမြားစှာကလညျး ကြှနျတေျာ့ သူငယျခငျြးအရငျး တှေ ညီအဈကို မောငျနှဈမ တှေ ရူံ့ခြ ပွောဆိုပွီး Group တှထေဲ က ထုပျပွဈကပြါတယျ . ကနြေပျစှာ ခံယူပါတယျ ခငျမြာ . ကြှနျတျော အားလုံး ယုံကွညျခကျြကို ဖကျြစီးတာ မဟု တျပါဘူး . နလေ့ညျက ဝနျမျး ညီမလေး တှအေလုပျထှကျတဲ့ File လေးတှေ နားထောငျမိတယျ .စိတျမကောငျးဖွဈမိတယျ .
သူတို့လိုအပျ တာတှေ တကျနိုငျ သလောကျကူဖို့လညျး သူငယျခငျြးတှေ နဲ့ လကျလှမျးမှီသလောကျစီစဉျနခြေိနျပါ . အလှူ နဲ့ မဖုံးပါဘူး . ဖုံးလို့လညျး မကနေပျဘူးဆိုတာ နားလညျပါတယျ . အခု မှ ဒီ စကားပွောတာ မဟုတျပါဘူး . တကယျပါ .
ကြှနျတျော လူစကား မပွောမိတဲ့ အတှကျ အနူးညှ တျတောငျးပ နျပါတယျ။ အားလုံး တကျကွှစှာ လှူပျရှားနတေဲ့ အခြိနျ မကွားခငျြတဲ့ စကားကို ကြှနျတေျာ့ဘကျက ထှကျမိတဲ့ အတှကျ အနူးညှတျတောငျးပနျပါတယျ .Live လှငျ့ကွညျ့ပါတယျ . Line လုံးဝ မကောငျးလို့ပါ .ကြှနျတေျာ့ Ph ကို ဆကျသမြှ လူတိုငျးကို လညျး ဖုနျးကိုငျပွီး တောငျးပနျနေ ပါတယျ ခငျမြာအနုပညာ ဆကျလုပျလို့လညျး မရတော့ဘူးဆိုတာ ကြှနျတျော သိပါပွီ ခငျမြာ 🙏🙏🙏ကြှနျတျော ကံတျောတျောနိမျ့နတေယျ ဆိုပွီး ရေးသားထားပွီး ပရိသတျတှလေညျး အောကျတှငျ ကွိုကျသလို ရေးသားဝဖေ နျ နိုငျပါတယျနျော။
ပရိသတ် ကြီးရေ အဆိုတော် ယုန်လေး ကတော့ သူလုပ်ခဲ့တဲ့ အမှားအတွက်ြ ပန်လည်တောင်းပန် စကားဆိုလိုက်ပြ န်တာပဲ ဖြစ်ပါတ ယ်နော်။ သူ့ရဲ့ အမှားများ ဟာလည်း ပြည်သူလူ ထုတစ်ရပ်လုံး ခွင့်မလွှတ်နိုင်စရာ ကိစ္စဖြစ်နေတာေ ကြာင့် လူမှုကွန်ယက်ပေါ်တွင် ပြင်းထန်စွာ ဝေဖန်ရှုံ့ချခြင်းတွေ ခံနေရတာလည်း ဖြစ်ပါ တယ်နော်။ အသံဖိုင်က ကျွန်တော့် အသံပါ ဝန်ခံပါတယ်။
အသံဖိုင် က ကျွန်တော့် အ သံပါ ဝန်ခံပါတယ် . ကျွန်တော် တောင်းပန်တယ် ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ မလုံလောက်ဘူး . ဘယ်လို စကားလုံးမျိုးမှ မရှိဘူးဆိုတာ သိပါတယ် ခင်မျာ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း အရင်းတွေကြီးပဲ ရှိတဲ့ Group Chat မှာ . အားလုံး ထင်မြင်ချက်ကို ပြောကျတယ် .ကျွန်ေ တာ့်ကို လည်း ပြောပါ ဆိုတဲ့ အတွက် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြောပါဆိုတဲ့ အတွက် ကျွန်တော်ပြောမိလိုက်ပါတယ် .
အဲ့ထဲက တစ်ယော က်က လိုက်ဖြန့် လိုက်တာပါ .မလုပ်သင့်ဘူး . အရှေ့က သီချင်းကိစ္စထဲက စာသားနဲ့ ပြည်သူတွေ ဝိုင်းမုန်းနေတဲ့ အချိန် ကျွန်တော့်ကို လူသတ်ကွင်းထဲ ထပ်ပိုလိုက်တာ အဲ့သူငယ်ချင်း မလုပ်သင့်ဘူးလိုထင်ပါတယ် .ကျွန်တော် အနူးအညွတ် တောင်းပန် ပါတယ်.တောင်းပန်လည်း ဘယ်သူ့မှ ခွင့်မလွ တ်ဘူးဆိုတာ သိပါတယ် . အကြိမ်ကြိမ် လုပ် အကြိမ်ကြိမ်တောင်းပန်သလို ဖြစ်နေတာလဲ စိတ်ဓာတ် ပိုကျပါတယ် .
ဂီတ သမားတွေကြီးပဲ Group ပရဟိတ Group တခြား နယ်ပယ် အစုံကGroup ပေါင်းများစွာကလည်း ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းအရင်း တွေ ညီအစ်ကို မောင်နှစ်မ တွေ ရူံ့ချ ပြောဆိုပြီး Group တွေထဲ က ထုပ်ပြစ်ကျပါတယ် . ကျေနပ်စွာ ခံယူပါတယ် ခင်မျာ . ကျွန်တော် အားလုံး ယုံကြည်ချက်ကို ဖျက်စီးတာ မဟု တ်ပါဘူး . နေ့လည်က ဝန်မ်း ညီမလေး တွေအလုပ်ထွက်တဲ့ File လေးတွေ နားထောင်မိတယ် .စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ် .
သူတို့လိုအပ် တာတွေ တက်နိုင် သလောက်ကူဖို့လည်း သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ လက်လှမ်းမှီသလောက်စီစဉ်နေချိန်ပါ . အလှူ နဲ့ မဖုံးပါဘူး . ဖုံးလို့လည်း မကေနပ်ဘူးဆိုတာ နားလည်ပါတယ် . အခု မှ ဒီ စကားပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး . တကယ်ပါ .
ကျွန်တော် လူစကား မပြောမိတဲ့ အတွက် အနူးညွ တ်တောင်းပ န်ပါတယ်။ အားလုံး တက်ကြွစွာ လှူပ်ရှားနေတဲ့ အချိန် မကြားချင်တဲ့ စကားကို ကျွန်တော့်ဘက်က ထွက်မိတဲ့ အတွက် အနူးညွတ်တောင်းပန်ပါတယ် .Live လွှင့်ကြည့်ပါတယ် . Line လုံးဝ မကောင်းလို့ပါ .ကျွန်တော့် Ph ကို ဆက်သမျှ လူတိုင်းကို လည်း ဖုန်းကိုင်ပြီး တောင်းပန်နေ ပါတယ် ခင်မျာအနုပညာ ဆက်လုပ်လို့လည်း မရတော့ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော် သိပါပြီ ခင်မျာ 🙏🙏🙏ကျွန်တော် ကံတော်တော်နိမ့်နေတယ် ဆိုပြီး ရေးသားထားပြီး ပရိသတ်တွေလည်း အောက်တွင် ကြိုက်သလို ရေးသားဝေဖ န် နိုင်ပါတယ်နော်။